International Mhuri mabhizinesi magweta muNetherlands - Law & More
Mhuri Bhizinesi Gweta
Law & More ane ruzivo rwakakura uye ruzivo mukupa mazano uye kubatsira mabhizinesi-anozvitarisira ane varidzi muNetherlands nekune dzimwe nyika. Kwemakore apfuura isu tavandudza kunzwisisa kwakadzama kwezvinhu zvinofambisa mabhizinesi emhuri neDutch uye nekuvapa zano repamutemo neremitero rekuvabatsira kuziva uye kuzadzisa zvinangwa zvavo.
DUTCH NEPASI YEMHURI YEMHURI YEMABHUKU
Isu tinopa zano pazvinhu zvekuchengetedza asset uye kuti ungabudirira sei kuchengetedza bhizinesi kubva pamutero wepamutemo nenjodzi dzemari, kusanganisira asi zvisingagumiri pamatanho ezvavanokanganisa.
Law & More inoshingairira kusarudza pamusoro peinonyanya kukodzera uye yemitero inoshanda zvimabhizinesi emhuri ingave kunze kwenyika kana mukati meNetherlands uchishandisa huwandu hwakazara hweDutch uye maratidziro ehukama akawanda emakambani anowanikwa.
Isu tine hunyanzvi mukubata nemazvo kusawirirana kwepamutemo uye nekunetsana pakati pemitezo yemhuri, vagovani venyama uye manejimendi, vanobatsirikana nevatori.
Vashandi vedu vanopa zano pamusoro pekutengeswa kwebhizinesi uku vachisimbisa kuratidzwa kwemutero weDutch.
E. in[email inodzivirirwa]